June 2021 – Page2– T-WORK SYSTEM
By T-Work System | June 2, 2021 | 0
Website Hosting ဝယ်ယူပြီး Domain Nameတခု အခမဲ့ အပြင် လုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်သော Customize Templates များ ရယူကြရအောင် ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နိုင်သော စိတ်ကြိုက် Web Template များ အလွယ်တကူ ထည့်နိုင်/ဖျက်လို့ရသော Modules များ ဖြင့် Facebook မှာ post တင်သလို အလွယ်တကူ Website ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ Ecommerce Website တွင်လည်း လူတိုင်း အလွယ်တကူ ထည့်နိုင်သော content နှင့် photoများမိမ်ိ၏ products စျေးနှုန်းများကို အလွယ်တကူ ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး ထည့်/ဖျက် ရနိုင်ပါတယ် 👍သင်တို့လုပ်ငန်းပိုင်းအတွက် ITပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ T-WORK SYSTEM က အဆင်သင့်ရှိနေပါပြီ☎HotLine:09-965 088114
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ကျနော်တို့ T-WORK SYSTEM သည် နည်းပညာအသစ်များစွာကို အသုံးပြု၍ လူကြီးမင်းတို့ (Online Shop) အရောင်းဆိုင်များကို ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သက်သာသာဖြင့် ပိုမိုစနစ်ကျသော အရောင်းဆိုင်များ ပြောင်းလဲဖန်တီးရန် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးသော Company ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့နှင့် ကိုက်ညီသော Plan များ၊ Package များရွေးချယ်ပြီး E-Commerce Website(Online Shop)တစ်ခု ပြုလုပ်၍ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ရောင်းချနိုင်ပါသည်။မည်သည့်နိုင်ငံ မည်သည့်ဒေသကမဆို စိတ်ချယုံကြည်စွာဖြင့် အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်စေမည့် E-Commerce Website (Online Shop) များပြုလုပ်ကာ Online Shop အား Facebook Page ဖြင့် ချိတ်ဆက် ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနိုင်ရန်အတွက် သက်သာသော ဈေးနှုန်းများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ E-Commerce Website (Online…
Creating Own Marketing Platform
Social Media ပေါ်ကနေပြီ Digital Marketing, Online Marketing , Digital Branding, E-Mail Marketing တွေပြုလုပ်လို့ရနေပြီ။ Website ဘာလို့လိုအပ်နေသေးတာလဲ ??? မည့်သည့် Social Media Platform ကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ ကိုယ်ပိုင် Platform တစ်ခုကတော့အပ်ပါသည်။ ခိုင်မာသေချာသည့် လုပ်ငန်းအတွက် Website တစ်ခုသေချာပေါက် လိုအပ်မှာပါ။ Website ကိုမိမိတို့ အသုံးပြုနေသည့် Social Media အားလုံး၏ အဓိကပင်မနေရာတစ်ခုအဖြစ်ထားရှိမည်ဆိုပါက …… Social Media တွင် လတ်တလော ကြော်ငြာပေးထားသည့် Post သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုသာ Customer များအလွယ်တကူတွေ့နိုင်ပြီး မိမိလုပ်ငန်း Service Product များ အားလုံးအကြောင်းသိရှိလိုပါက History ပေါင်းများစွာကို ကျော်ဖြတ်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။…
Catalog Book to Catalog App
အခုလို IT ခေတ်ကြီးမှာ စာအုပ်တွေ ထက် ဖုန်းတွေက အသုံးများလာပီနော် 📘 📲 Catalog Book တွေသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း စာအုပ်ရဲ့အရွယ်အစားကြီးလာတာနုဲ့အမျှ သယ်ဖို့ကလည်းအဆင်မပြေဖြစ်လာနိုင်တယ်လေ။ ဒါကြောင့် စိတ်ကူးမိကြဖူးမှာပေါ့။ စာအုပ်ကြီးကို ဖုန်းထဲထည့်ယူသွားလို့ရရင် ကောင်းမှာပဲလို့။ ကဲ စိတ်ကူးလေးတွေ အမှန်အကန်ဖြစ်လာပါပြီနော်။ 💯💯 Catalog App သုံးခြင်းအားဖြင့် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်မလဲဆိုရင်…. ✏ပစ္စည်း အသစ်ထွက်တိုင်း ဈေးနှုန်းတွေ အပြောင်းအလဲရှိတိုင်း Catalog စာအုပ် အသစ်တွေ ထုတ်ရခြင်းမှ ကင်းဝေစေနိုင်ခြင်း ✏မိမိထုတ်လုပ်ထားသော Catalog App မှ ပစ္စည်းများ၏ ပုံများ ဈေးနှုန်းများ အချက်အလက်များကို အလွယ်တကူ ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း ✏Website နဲ့လည်း ချိတ်ဆက်ပြီး Website က Data တွေ ကို…
ရောင်းချမယ့် ကုန်တွေရှိပြီး ဆိုင်ခန်းစရိတ်အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်နေပါသလား😔
ရောင်းချမယ့် ကုန်တွေရှိပြီး ဆိုင်ခန်းစရိတ်အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်နေပါသလား😔 ဒါဆိုရင်တော့ ၁နှစ်ပတ်လုံးမှ 120,000 ကျပ်သာ ကျသင့်မယ့် Online Website👨‍💻 တခု တည်ဆောက်လိုက်ပါ ဝန်ထမ်းခ💰လည်း မကုန်တော့ဘူး မီတာခဘာညာ အထွေထွေစရိတ်တွေ📜လည်း ကုန်စရာမလိုတော့ဘူးနော် 120,000 ကျပ်တည်းမို့ အထင်တော့ မသေးလိုက်နဲ့ဦး🤗 Securityလည်း အပြည့်အ၀ စိတ်ချရပြီး Emails တွေလည်း အကန့်အသတ်မရှိ ဖွင့်နိုင်တယ်ဆိုတော့👏 လုပ်ငန်းသုံးအတွက် အရမ်း အဆင်ပြေပြီပေါ့👍 ☎HotLine:09-965 088114📩sales@tworksystem.com🏡 T-WORK SYSTEM Co.,Ltd , No (14/1), 79th Street, between 39th Street and 40th Street, Maharaungmyae Township, Mandalay.
Starting Point of Website
ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် #Website 🌐🌐🌐 တစ်ခု လုပ်ချင်တယ်။ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းသုံး #E-Mail 📩📩📩 လည်းသုံးချင်တယ်။ကုန်ကျစရိတ်အများကြီးလည်း မသုံးချင်သေးဘူး။💸💸💸 ဒါပေမဲ့ ဈေးပေါတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အရာတွေကဲ့သို့ မိမိ Website မှာလည်း ခဏခဏ Errorဖြစ်လိုက်, မကြာမကြာ Site Down သွားလိုက် ဖြစ်နေတဲ့ Website ကိုတော့မလိုချင်ဘူး။ 📉📉📉Secure ဖြစ်တဲ့ Website လေးလည်းဖြစ်ချင်တယ်။ E-mail ကအစလုံခြုံ ရေးကောင်းတဲ့ Service လေး လိုချင်တယ် ဖြစ်ချင်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ 😵😵😵 ဟုတ်ကဲ့ T-WORK SYSTEM မှာအဖြေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Company မှ အနည်းဆုံး 90,000 Ks(Per Year) တန် 512MB Hosting Package မှစတင်၍…
Hosting Service with Single Page within Limited Time
Hosting ၁ ခုရှိပြီဆိုတာနဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာပြောပြပေးပါမယ်နော်T-WORK SYSTEM မှာ Hosting ကို ဝယ်ယူလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ✔လုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Single Page ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ် ✔လောလောဆယ် Development ပိုင်း မလုပ်ဖြစ်သေးရင်တောင်မှ Single Page လေး ရရှိထားတော့ လုပ်ငန်းအတွက် Website လေး start up လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ ✔ဒါ့အပြင် CRM Software တွေတခြားသော App တွေကိုပါ Host လုပ်ပြီး အသုံးပြုလို့ရမှာပါ ✔ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အနေနဲ့ရောProject တွေ စမ်းချင်တဲ့အခါမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စပ်တူဝယ်ယူပြီး Project တွေကိုHost လုပ်ပြီး စမ်းနိုင်ပါတယ် ✔၂ သောင်းကျပ်သာ ကျသင့်မည့် Domain Name ပါထပ်မံဝယ်ယူလိုက်မည်ဆိုလျှင်လည်း၁ခုကို ၃ သောင်း ၄ သောင်း…
Business အတွက် Websiteရှိနေပြီလား ???ဥပမာ 》》 https://www.example.comလူအများစုဟာ Internet ကိုFacebook တခုတည်းကိုသာမဟုတ်တော့ပဲ ပိုမိုရင်းနှီးစွာ အသုံးပြုလာကြပါပြီ။Internetကိုအသုံးပြုပြီး onlineပေါ်ကနေ ဈေးကွက်အပြိုင်ရှာဖွေနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ Facebook Business Page ရဲ့ Profile ထဲကWebsite Address ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကွက်လပ်ဖြစ်နေလို့မရတော့ပါဘူး။Email AddressနေရာမှာGmail အစား ကိုယ်ပိုင် Business Mail နဲ့အစားထိုးဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။Facebook ကနေ မိမိရဲ့လုပ်ငန်းကို ကြေငြာနေရုံနဲ့တင် အဆင်ပြေပြီ ဆိုတဲ့အတွေးကိုဖျောက်ပစ်ရမဲ့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။တချို့လုပ်ငန်းတွေ Website မသုံးဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာ Website သည်လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် ပိုပိုပြီးအရေးပါလာပါပြီ။ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ T-WORK SYSTEM မှ ၁သိန်း ၁သောင်းကျပ်သာကျသင့်မည့် Hosting + Domain Service ကိုဝယ်ယူလိုက်သည်နှင့် လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းနှင့်သင့်လျော်မည့် Single Page Website တခုကိုဖန်တီးပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၁သိန်း…
© 2021 T-WORK SYSTEM | Powered by T-WORK SYSTEM Co.,Ltd.